न्यायाधीश र कर्मचारीको नाममा बेरुजू : तलबबाट रकम झिकेर भ्रमणमा खर्च | गृहपृष्ठ
Home विविध न्यायाधीश र कर्मचारीको नाममा बेरुजू : तलबबाट रकम झिकेर भ्रमणमा खर्च
on: ३ बैशाख २०७६, मंगलवार ०८:११ विविध
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भ्रमणका लागि तलब शीर्षकमा रकम झिकी न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई रू. १ करोड ५ लाख १६ हजार पेश्की बाँडेको पाइएको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७५ मा पेश्की लिएको ३५ दिनभित्र फछ्र्योट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, हालसम्म उक्त रकम बेरुजूमै रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार भ्रमणका लागि पेश्की लिनेहरूमा १० पदाधिकारी र १७ जना कर्मचारी छन् । पेश्की लिई समयमा फछ्र्योट नगर्नेहरूमा सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी छन् । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले रू. १४ लाख २१ हजार ९ सय ८१ फछ्र्योट गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नाममा पनि रू. ४२ लाख ९ सय बेरुजू देखिएको छ ।
तलबमा छुट्याइएको रकम भ्रमणका लागि झिक्न नहुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चका एक कर्मचारीले त्यसरी झिक्ने काम नै गैरकानूनी भएको आर्थिक अभियानसँग बताए । न्यायाधीशले लिएको पेश्की ३५ दिनभित्र फछ्र्योट नगर्नु झनै आश्चर्य भएको उनले उल्लेख गरे ।
साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्न सुझाव
१ बैशाख २०७६, आईतवार ०७:४९
बेरुजूमाथि सूक्ष्म अध्ययन थालियो
२० पुष २०७५, शुक्रबार ०७:४४